Uzo Pvc China Manufacturers & Suppliers & Factory
Uzo Pvc - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Uzo Pvc)
Ọnụ Ụzọ Ndozi Na-ebu Ọnụ Na-akpaghị aka
Na-akpaghị aka na-emechi ọnụ ụzọ mgbakọ elu dị elu
High Speed stacking Door Isi Ackinggba ọsọ ọsọ dị elu Door na-arụ ọrụ dị ka ihe enyemaka dị mkpa na ọrụ gị, Iji oghere / imeghe ngwa ngwa ruru 0.6 ~ 1.5m / s, nke nwere ike idozi ya. Don'tkwesighi ichegbu onwe gị banyere oge igbu oge. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ ikuku / okpomoku. *...
Nnukwu ọsọ na-adakọkwa ọnụ ụzọ
High Speed stacking Door Isi Gini mere i choro imeghe uzo uzo uzo PVC di elu (kpochiri uzo, imechi uzo uzo ihe eji eme ihe, uzo uzo eji eme ihe na adighi adi) maka ahia gi? Ichekwa ụzọ ọsọ ọsọ nwere ike imeghe / mechie ihe karịrị 1m / s ma nwee nnukwu ọrụ iji guzogide ike, n'agbanyeghị ebe ị wụnyere ọnụ ụzọ gị,...
Uzo Pvc Uzo Pvc Kere Uzo PVC Uzo Pelu Uzo Ulo elu Pvc di elu Ụlọ Pvc Uzo elu di elu Uzo Uzo Uzo Uzo